Entertainment Archives - Myanmar End User
Entertainment – ဖျော်ဖြေရေး နှင့် သက်ဆိုင်သော ရုပ်သံ၊ ဆောင်းပါးများ ကြည့်ရန်
#ရှေ့ပေါက်တွေက စိတ်မချရဘူး# တနေ့ကပေါ့… ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ်သွားရတယ်… အမည်းရောင် screen မှာ စာတန်းအဖြူလေးတွေ ပေါ်တယ်.. ပြီးရင် shut down ကျကျသွားတယ်တဲ့… အော်… ဒါဆို.. window မတက်တာဘဲ ဆိုပြီး… window အခွေလေး ယူသွားတယ်… ရောက်တော့ ...
#ပတ်စဝေါ့လေး ဖျက်ချင်လို့# အန်တီ – ကွန်ပျူတာက ပတ်စဝေါ့လေး ဖျက်ချင်လို့…. ကျွန်တော် – ဘာဝင်းဒိုးလဲ အိတ်စ်ပီလား..? ဝင်းဒိုး ဆဲဗင်းလား…? အန်တီ – ဝယ်ထားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး… ကျွန်တော် – ဒါဆို ဆဲဗင်းပေါ့… ဟုတ်.. ဟုတ်… ...
Zawgyi Version Facebook live streaming ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလမှာတော့ Facebook iOS application နဲ့ အမေရိကန်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင် Facebook live ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြပြီ ...
By Myanmar End User August 17, 2017 0
အခုပဲ ကြည့်သင့်တဲ့ Hacking Movies ၁၁ ခု
ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဟောလီးဝုဒ်မှာ ဟက်ကာတွေ အကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပညာ ဝါသနာပါသူများအတွက်တော့ ဟက်ကာတွေရဲ့ အံ့မခန်းနည်းလမ်းတွေကို လေ့လာရမှာပါ။ အောက်မှာတော့ အကောင်းဆုံး Hacking Movies ၁၁ ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Algorithm (2014) Algorithm ...
By Myanmar End User January 18, 2017 0